Briscola 1.6.9 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.6.9 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ Briscola
Briscola ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Enjoy playing Briscola matches on your Android device!
Briscola is the typical Italian card game: you can choose from 14 different decks of cards (Neapolitan, Piacenza, Tuscany, Piedmont, Sicilian, Bergamo, Bologna, Trentino, Trevisane, Triestine, Romagna, Sarde, Milanesi, Poker), select the game level (easy or hard) and customize the cover of the cards! Try to make the best score and see your position on the world online leader board, which updates in real time!
It's possible to play against:
- The computer in single player mode;
- A real casual player, via the online multiplayer mode;
- Your friend via the multiplayer Facebook mode (requires that both have the app installed);
- A friend via the Bluetooth multiplayer mode;
Fun is guaranteed, you have only have to try :-)
If you like to contact me to reportabug oranew feature for the game (such asanew deck of cards), you can write me on FACEBOOK or visit my website!
Facebook page: https://www.facebook.com/LisitsoApp
Have fun with Briscola by Lisitso!
Briscola ကစားခံစားကြည့်ပါသင့်ရဲ့ Android device ကိုအပေါ်ကိုက်ညီ!
Briscola ပုံမှန်အီတလီ card ကိုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်: သင်ဂိမ်းကို select လုပ်ပါ, ကတ်များ 14 ကွဲပြားခြားနားသောကုန်းပတ် (အဘိဓါန် Neapolitan, Piacenza, Tuscany, Piedmont, အဘိဓါန် Sicilian, Bergamo, Bologna, Trentino, Trevisane, Triestine, Romagna, Sarde, Milanesi, Poker) မှရှေးခယျြနိုငျ အဆင့်အတန်း (လွယ်ကူသောသို့မဟုတ်ခက်) နှင့်ကတ်များ၏အဖုံးကိုစိတ်ကြိုက်! အကောင်းဆုံးကိုရမှတ်လုပ်ကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်ကို update သောလောကီအွန်လိုင်းခေါင်းဆောင်ဘုတ်အဖွဲ့, ပေါ်မှာသင့်အနေအထားကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ!
- တစ်ခုတည်းကစားသမား mode မှာကွန်ပျူတာ;
- အွန်လိုင်း multiplayer mode ကိုမှတဆင့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်ပေါ့ပေါ့ကစားသမား,
- အ multiplayer Facebook က mode ကိုမှတဆင့်သင့်ရဲ့မိတျဆှေ (နှစ်ဦးစလုံး app ကို install လုပ်ပြီးကြပြီလိုအပ်သည်);
- ဘလူးတုသ် multiplayer mode ကိုမှတဆင့်မိတ်ဆွေတစ်;
ပျော်စရာအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျကိုသာ :-) ကြိုးစားရန်ရှိသည်
သင်တစ်ဦး bug ကိုသို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သောကတ်များအသစ်တစ်ခုကိုကုန်းပတ်ကဲ့သို့) ဂိမ်းတစ်ခု feature အသစ်သတင်းပို့ဖို့ကျွန်မကိုဆက်သွယ်ပါလိုလျှင်သင် Facebook ပေါ်မှာငါ့ကိုရေးဖို့သို့မဟုတ်ငါ၏အ website ကိုကြည့်ရှုနိုငျသညျ!
Facebook ကစာမျက်နှာ: https://www.facebook.com/LisitsoApp
Lisitso အားဖြင့် Briscola နှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်!
Briscola အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Briscola အား အခ်က္ျပပါ
storeufficialeitaliano စတိုး 521 261.69k
Briscola ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ကဒ္ အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Briscola အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.6.9
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.lisitso.com/privacy.html
App Name: Briscola
File Size: 7.51MB
Release date: 2019-08-22 19:23:37
လက်မှတ် SHA1: 31:AF:2F:44:AB:9C:7C:19:24:BA:7A:99:24:D7:88:65:30:70:86:65
ထုတ်လုပ်သူ (CN): alisi
Briscola APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ